Ch6मत्ती – 2माछा
घर / बाइबल / मत्ती को सुसमाचार / Ch6मत्ती
6:1 "ध्यान देउ, तिमी मानिसहरू अघि आफ्नो न्याय प्रदर्शन नत्र, क्रममा तिनीहरूलाई देखेको गर्न; अन्यथा तपाईं आफ्नो पितासित इनाम छ छैन, जो स्वर्गमा छ.
6:2 त्यसैले, तपाईं alms दिन जब, तपाईंले पहिले एक बिगुल ध्वनि रोज्न छैन, को कपटीहरू सभाघरहरूमा र सहर मा जस्तै, ताकि तिनीहरूले मानिसहरू द्वारा सम्मान हुन सक्छ. Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम प्राप्त गरेका.
6:3 तर तपाईं alms दिन जब, आफ्नो बायाँ हात थाहा आफ्नो दायाँ हात के गरिरहेको छ दिनुहोस् छैन,
6:4 तपाईंको almsgiving मा गोप्य हुन सक्छ भनेर, र आफ्नो पिताको, जो मा गोप्य देख्नुहुन्छ, तपाईं चुक्ता हुनेछ.
6:5 प्रार्थना गर्दा र, तपाईं कपटीहरू जस्तै हुनु हुँदैन, प्रार्थना गर्न सभाघरहरूमा र सडकमा को कुना मा जो खडा मन, ताकि तिनीहरूले मानिसहरू देखेको हुन सक्छ. Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम प्राप्त गरेका.
6:6 तर तिमी, जब तपाईं प्रार्थना, आफ्नो कोठा प्रवेश, र ढोका बन्द भएको, मा गोप्य आफ्नो पितालाई प्रार्थना, र आफ्नो पिताको, जो मा गोप्य देख्नुहुन्छ, तपाईं चुक्ता हुनेछ.
6:7 र प्रार्थना गर्दा, धेरै शब्दहरू चयन छैन, विधर्मीहरूलाई जस्तै. तिनीहरूले शब्दहरूको आफ्नो अतिरिक्त द्वारा तिनीहरूले पालन गर्न सक्छ विचार.
6:8 त्यसैले, तिनीहरूको अनुकरण गर्न छनौट छैन. लागि आफ्नो पिता आफ्नो आवश्यकता हुन सक्छ थाह, पनि अघि तपाईं उसलाई सोध्न.
6:9 त्यसैले, तपाईं यसरी प्रार्थना गर्नेछु: हाम्रो बुवा, जो स्वर्गमा छ: तपाईंको नाम पवित्र राखिएको हुन सक्छ.
6:10 तपाईंको राज्य आउन सक्छ. तपाईंको गरिनेछ सक्छ, स्वर्गमा रूपमा, त्यसैले पनि पृथ्वीमा.
6:11 हामीलाई यो दिन हाम्रो जीवन धान्ने रोटी दिन.
6:12 र हाम्रो ऋण क्षमा, हामी पनि हाम्रो ऋणीहरूलाई क्षमा.
6:13 र प्रलोभनको मा हामीलाई नेतृत्व. तर दुष्ट हामीलाई मुक्त. Amen.
6:14 तिमी मानिसहरू आफ्नो पाप क्षमा हुनेछ यदि लागि, आफ्नो स्वर्गका पिताले पनि तपाईं आफ्नो अपराध क्षमा हुनेछ.
6:15 तर यदि तिमी मानिसहरू क्षमा छैन, न आफ्नो पिता तपाईं आफ्नो पाप क्षमा हुनेछ.
6:16 र तपाईं छिटो गर्दा, उदास बन्न चयन छैन, को कपटीहरू जस्तै. तिनीहरूले आफ्नो अनुहार बदल, त्यसैले आफ्नो उपवास मानिसहरूलाई स्पष्ट हुन सक्छ. Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम प्राप्त गरेको.
6:17 तर तपाईं को लागि रूपमा, तपाईं छिटो गर्दा, आफ्नो टाउको अभिषेक र आफ्नो अनुहार धुनुपर्छ,
6:18 आफ्नो उपवास मानिसहरूलाई स्पष्ट हुनेछ भनेर छैन, तर आफ्नो पितालाई, जो मा गोप्य छ. र आफ्नो पिताको, जो मा गोप्य देख्नुहुन्छ, तपाईं चुक्ता हुनेछ.
6:19 पृथ्वीमा आफूलाई सम्पत्तिहरू लागि भण्डारण गर्न छनौट छैन: जहाँ खियाले र किरा उपभोग, र चोर जहाँ मा तोड र चोरी.
6:20 बरु, स्वर्गमा आफूलाई सम्पत्तिहरू लागि भण्डार: जहाँ न खियाले न त किरा खपत, र चोर जहाँ मा तोड छैन र चोरी.
6:21 जहाँ तिम्रो धन हुन्छ लागि, त्यहाँ पनि आफ्नो हृदय.
6:22 आफ्नो शरीर को दीपक आफ्नो आँखा छ. आफ्नो आँखा स्वास्थ्यकर छ भने, आफ्नो सम्पूर्ण शरीर हल्का भरिएको हुनेछ.
6:23 तर आफ्नो आँखा दुषित भएको छ भने, आफ्नो सम्पूर्ण शरीर darkened गरिनेछ. त्यसपछि भने कि तपाईंलाई छ ज्योति अन्धकार छ, कि अन्धकार कसरी ठूलो हुनेछ!
6:24 कोही पनि दुई मालिकको सेवा गर्न सक्षम छ. उहाँले एक घृणा हुनेछ या त को लागि, र अन्य प्रेम, वा उहाँले एक साथ लागिरहन हुनेछ, र अन्य नाइँनास्ति. तपाईं परमेश्वर र धन सेवा गर्न सक्दैन.
6:25 अनि त म तपाईंलाई भन्न, आफ्नो जीवनको बारेमा चिन्तित हुन छैन, तपाईं खान हुनेछ के गर्न रूपमा, न त आफ्नो शरीर बारेमा, तपाईं लगाउने हुनेछ के गर्न रूपमा. छैन जीवन खाना भन्दा बढि छ, र शरीर वस्त्र भन्दा बढी?
6:26 हावा को चरा विचार, तिनीहरूले कसरी न रोप्न, न त कटनी, न त barns मा भेला, र अझै आफ्नो स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ. उनीहरूले भन्दा छैन धेरै ठूलो मूल्य हो?
6:27 र तपाईं को जो, सोच द्वारा, आफ्नो कद एक cubit थप गर्न सक्षम छ?
6:28 र वस्त्र लागि रूपमा, किन चिन्तित छन्? क्षेत्र को लिली विचार, कसरी बढ्न; तिनीहरूले न काम न त बुनाई.
6:29 तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, कि पनि सुलेमानले छैन, आफ्ना सबै महिमा मा, यी मध्ये एक जस्तै arrayed थियो.
6:30 परमेश्वरको यति क्षेत्र को घाँस कपडे त्यसैले यदि, जो यहाँ आज, र ओवन भोलि हालिन्छ, उहाँले तपाईंलाई लागि धेरै कसरी हेरचाह, विश्वासमा हे सानो?
6:31 त्यसैले, चिन्तित हुन चयन छैन, यसो: 'हामी के खानु पर्छ, र हामी के लगाउँला, र हामी ढाकिएको गरिनेछ के संग?'
6:32 अन्यजातिहरूको लागि यी सबै कुराहरू खोज्न. अहिलेसम्म आफ्नो पिता तपाईंले यी सबै कुराहरू चाहिन्छ भनेर थाह.
6:33 त्यसैले, परमेश्वर र उहाँको न्याय को पहिले राज्यको खोजी, र यी सबै कुराहरू साथै तपाईं थपियो गरिनेछ.
6:34 त्यसैले, भोलि बारेमा चिन्तित हुन छैन; भविष्यको लागि दिन नै लागि चिन्तित हुनेछ. दिन को लागि पर्याप्त आफ्नो दुष्ट छ। "